Nahemotra Ny Didim-Pitsarana Ireo Saodiana Mpikatroka Mafàna Fo · Global Voices teny Malagasy
Nahemotra Ny Didim-Pitsarana Ireo Saodiana Mpikatroka Mafàna Fo	Voadika ny 13 Janoary 2013 6:55 GMT
Zarao: Ity lahatsoratra ity da ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny : Mpitaky fiovàna miatrika fitsaràna ao Arabia Saodita.
Voampanga ireo mpikatroka mafàna fo anankiroa ireo ho “tsy manaja ny mpitondra sy ny mpandimby azy” sy “manandrana misakantsakana ny fandrosoan'ny firenena.” Nanamarika ny iray amin'ireo fitsarana vitsy azon'ny daholobe nantrehana momba ireo mpikatroka mafàna fo ara-politika izy ity, ary nahasarika betsaka ny sain'ny media sy ny sosialy, izay nitarika ireo mafàna fo hanararaotra hitaky ny hisian'ny tena fiovàna sy ny hitzonana ny Minisitry ny Atitany ho tomponandraikitra amin'ireo fiampangàna fanaovana fampijaliana sy famonjana tsy amin'antony olona an'arivorivony. Naka ny toeran'ny fanjakana ny mpitsara nandritra ireo fotoam-pitsarana maro, nandresy lahatra ireo mpikatroka mafàna fo roa momba ny fahalalahana mihetsika ara-pinoana sy ny adidin'ireo mpitondra fivavahana hanaiky ny mpitondra.
Ao amin'ny Twitter, manambara i al-Qahtani hoe :
@MFQatahni: Nahemotra aminà daty tsy voafaritra ny fihainoana ny didim-pitsaràna amin'ny raharaha #acprahr. Nanome toky ny filohan'ny fitsaràna fa hampahafantatra antsika mikasika azy ity. #Saudi
Ny Jona 2012 no nanomboka ny fitsarana azy ireo, tsy niaraka ary natao miafina. Taorian'ny fakàna am-bavany voalohany dia natambatry ny mpitsara ireotranga roa ireo. Ampolony ireo mafàna fo nanatrika ny fotoana fifanatrehana faharoa ary nampita mivantana tamin'ny bitsika ny fotoana manontolo, naka hatraminà sary mihitsy aza, izay nahatonga ny mpisara nony avy eo namoaka didy milaza fanitsakitsahana ny efitrano fitsarana ka nanapa-kevitra ny hanao anaty efitrano mikatona ny fotoam-pitsaràna manaraka. Nandritra ireo fotoana fakàna am-bavany ho avy nanaraka teo, nolavin'ireo mpikatroka roa ny hotsaraina miafina ary nandrahona ny tsy hiloa-bava. Tamin'ny fotoana fahadimy dia nilefitra ny mpitsara ka namadika izany ho azon'ny daholobe natrehana tokoa. Nitohy nitombo ny isan'ireo nanatrika ny fitsarana, nahasarika ny sain'ny media iraisampirenena sy ireo mpikatroka mafàna fo.
Iray amin'ireo vitsy eto ambonin'ny tany mbola mamikotra fatratra amin'ny fitondran'olon-tokana i Arabia Saodita ary manana rakitra ratsy amin'ny resaka fanitsahana zon'olombeona, izay ahitàna fitazonana tsy amin'antony olona maherin'ny 30.000. Hatramin'ny nametrahan'ny fanjakana ny (fomba fandikany manokana ny) lalàna Sharia, dia efa raisina ho resa-pinoana ny fitsaràna sy ny fakàna am-bavany mikasika izay dikan'ny Sharia.
Ity lahatsoratra ity da ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny : Mpitaky fiovàna miatrika fitsaràna ao Arabia Saodita.
Vakio amin'ny teny Deutsch, Dansk, Español, বাংলা, Français, Português, English